Sababaha Ay Dadku Uga Bixi Karaan Emailkaaga (Iyo Sida Looyareeyn Karo Macaashka) | Martech Zone
Sababaha Ay Dadku Uga Bixi Karaan Emailkaaga (Iyo Sida Loo Yareeyo Ka Bixinta Macaamiisha)
Macaamiisha ayaan dan ka lahayn farqiga u dhexeeya ka-saarista iyo si fudud u calaamadeynta emaylkaaga sida SPAM… waxay sameeyaan maalin kasta. Iyagu ma oga inay saameyn ku yeelanayaan ka warbixinta emailkaaga maadaama SPAM ay kaa horjoogsan karto sanduuqyada kumanaan kun oo macaamiil isla Adeeg Bixiye Internet ah. Waa sababta aan si dhow ula soconno kuwayaga meelaynta sanduuqa la-hawlgalayaashayada oo ah 250ok!
Markaa qarinta xiriirka aan ka bixin cinwaanka emaylkaaga kaliya maahan inuu yareynayo tirada dadka ka baxayaasha ah, sidoo kale wuxuu kugu dhibayaa adiga dhibaato gelinta sanduuqaaga. Ha la yaabin haddii wax ka beddelkaas yar ee aad ku sameysid shaashadda emaylkaaga si aad u adkaato inaad ka saarto dabaysha oo dileysa meelaynta sanduuqaaga iyo heerka riix-ku-xigga iyo heerka beddelaadda emaylladaada.
Sababaha ugu sarreeya ee dadku uga baxaan emailkaaga
Email liita design ama nuqul (ha ilaawin sheybaarada emailka ka jawaabaya).
E-mayl xad-dhaaf ah ama xadidan inta jeer. Waa sababta aan ugu soo bandhigno liis gareyn maalinle iyo toddobaadle ah joornaalkeenna adoo adeegsanaya Wareeg Press.
Udiraya emayl la'aan fasax.
Aan khusayn waxyaabaha ku jira emaylka. 24% jawaabeyaasha BlueHornet waxay yiraahdeen way baxayaan maxaa yeelay emaylka ma khusayn!
Dhamaadka dalab ama iib.
Weerar ama marin habaabin maadada line.
La'aanta shakhsi ahaaneed (in kasta oo aan u malaynayo shakhsiyaynta xun inay ka liidato midna).
Isbedelka doorashooyinka, sida inaad ka tagto shirkad ama warshad.
Infograafigani ka yimid EmailMonks waxay bixisaa talo aad u fiican oo ku saabsan hagaajinta xulashooyinkaaga rukumashada iyo hirgelinta qaar ka mid ah hababka ugu fiican ee lagu hagaajinayo liiskaaga haynta iyo in la yareeyo tirada dadka aan is diiwaan gelin.
Tags: naqshadeynta emaylkainta jeer ee emaylkadalab emaylshaqsiyeynta emaylkakhadadka mawduuca emaylkaiimaylka ka noqoemailkahaynta liiskaxarunta doorashadaxarunta rukunkaka jooji dhaqamada ugu fiicansababaha ka bixidmaxay dadka uga baxaan
Suuqgeeyayaasha Mawduuca: Jooji Iibinta + Bilaabista Dhageysiga